हकप्रद निष्कासनको लागि सेबोनमा निवेदन दिएको युनाइटेड इन्स्योरेन्सको नाफा कति ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी हकप्रद निष्कासनको लागि सेबोनमा निवेदन दिएको युनाइटेड इन्स्योरेन्सको नाफा कति ?
on: May 10, 2019 लगानी
हकप्रद निष्कासनको लागि सेबोनमा निवेदन दिएको युनाइटेड इन्स्योरेन्सको नाफा कति ?
वैशाख २७, काठमाडौं (अस) । चालू आवको ९ महीनामा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू. ७ करोड ५५ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १७ प्रतिशतले घटेको हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. ९ करोड १९ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३० करोड २४ लाख रहेको छ ।
पूँजी वृद्धिका लागि कम्पनीले २ सय ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि सेबोनमा २०७५ चैत २९ गते निवेदन दिएको छ । २ सय ४० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको पूँजी रू. १ अर्ब २ करोड पुग्नेछ । बीमा समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएसँगै कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्न लागेको हो ।
रिजर्भ कोषमा रू. ८ करोड १८ लाख छुट्याएको छ । यो रकम गत आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ३० लाख ८६ हजार ऋणात्मक थियो । चालू आवको चैत मसान्तसम्ममा कम्पनीले रू. ३५ करोड ५५ लाख बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने जारी बीमालेखको संख्या ४९ हजार ४ सय ३८ रहेको छ । प्रतिशेयर आम्दानी रू. २४ दशमलव ९७, मूल्य आम्दानी अनुपात ३१ दशमलव १२, तरलता अनुपात ४ दशमलव २२ र प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २ सय ३९ दशमलव ७७ रहेको छ ।
युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, ९ जेठ २०७६)
युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको शेयर रजिष्ट्रारमा एनएमबि क्यापिटल
युनाइटेड इन्स्योरेन्सले २४० प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्न बोर्डमा दियो निवेदन
पूँजी वृद्धिका लागि युनाइटेड इन्स्योरेन्सले हकप्रद शेयर जारी गर्दै